MATE: Kedu ihe ọ bụ na kedu etu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
MGBE bụ ìhè zuru ezu Ebe obibi Desktọpụ, banyere nke na-amasị ya pawuda, anyị anaghị ebipụtakarị oge niile, nke anyị ikpeazụ post na-akọwapụta banyere ya, ihe karịrị afọ 3 gara aga.
Nke a bụ eziokwu n'ihi na, n'ozuzu, ọ bụ naanị kwuru maka ya Linux Mint ma ọ bụ Ubuntu MATE, ebe ọ bụ na kwuru Ebe obibi Desktọpụ A na-eji ya na ebe abụọ Nkesa GNU / Linux. Ya mere, n'ime akwụkwọ a, anyị ga-elekwasị anya karịsịa Kedu ihe ọ bụ? y Kedu ka esi etinye?. N'ezie, mesie ike ihe dị ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster. Nke bụkwa ugbu a ihe ndabere maka Mwepụ MX-Linux 19 (ujo ojoo).
Na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya, a na-ewere MATE dị ka:
"A Desktop Gburugburu ebe obibi bụ lna-eso GNOME 2. Ọ na-enye kensinammuo na gburugburu ebe obibi site na iji ihe atụ ọdịnala nke Linux na sistemụ arụmọrụ Unix ndị ọzọ. A na-etolite MATE n'ọrụ ịgbakwunye nkwado maka teknụzụ ọhụrụ, na-echekwa ahụmịhe desktọọpụ ọdịnala. ” Nwunye ukara website
1 Ihe niile gbasara MATE
Ihe niile gbasara MATE
MGBE wepụtara na ụbọchị 19 August 2011 na aha ya si na yerba nwunye, nke umu holly nke di na mpaghara okpomoku nke South America.
Ugbu a na-aga maka 1.24 mbipute (mmepe na 1.22 (anụ).
MGBE dị site na ụlọ ọrụ gọọmentị na ọtụtụ GNU / Linux Distros, dị ka: DEBIAN, Mint, Ubuntu na Fedora.
Ihe omumu nke umu akwukwo nke MGBE O nwere ọtụtụ mmemme nwere aha dị iche na ndị ahụ ihe mbụ GNOME, iji zere esemokwu esemokwu. Dịka ọmụmaatụ: Igbe (Njikwa faili), Pen (Text Editor), Anya nke MATE (Onye nlele onyonyo), na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mmalite ya, MGBE bụ naanị dakọtara na GTK + 2. Dị ka nke mbipute 1.12 ọ bụ dakọtara na ma GTK + 2 dị ka na GTK + 3.
Nnọọ fechaa ya na ngwa di nma ma kwụsie ike.
Ọdịdị tradicional nke na-eme ka ojiji ya na nnabata ya.
Nwa afọ ndakọrịta na ngwa GNOME n'ihi na ha abụọ na-eji GTK +.
Ọ bụ ezigbo maka novice ndị mmadụ ndị na-amalite na GNU / Linux ụwa na / ma ọ bụ nwee akụrụngwa akụrụngwa.
O nwere obere animations na eserese ma ọ bụ nsonaazụ anya e jiri ya tụnyere ebe Desktọpụ ndị ọzọ siri ike dịka KDE Plasma ma ọ bụ Cinnamon.
Ọtụtụ ndị na-atụle ọkwa ọkwa ya dị oke ma dị mfe ma e jiri ya tụnyere mpaghara Desktọpụ ndị ọzọ siri ike dịka KDE Plasma ma ọ bụ Cinnamon.
Obere obere ngwa ọdịnala na mgbakwunye e jiri ya tụnyere ebe Desktọpụ siri ike dịka KDE Plasma ma ọ bụ Cinnamon, mana ọ na-ejigide uru nke iji ọtụtụ ngwa GNOME3.
Nnọọ weebụsaịtị nke MATE Project
Ebee ka ị nwere ike ịga na Blog, Ntuziaka Ntuziaka, Ozi banyere mmepe na Onye ọrụ obodo, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Njikọ ndị a dịkwa iji gbakwunye ozi na MGBE:
Họrọ MATE na Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Cheta na: I nwekwara ike wụnye a Desktọpụ Environment dabere na MATE mfe ma ọ bụ zuru ezu site dochie ngwugwu mate site mate-core o mate-desktop-environment. Inwe ike imeju ya na nchịkọta dịka: mate-desktop-environment-extras y mate-tweak.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ Ebe obibi Desktọpụ MGBE, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Nbanye Manager
Chetakwa, nke a bụ ise post nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Ndị gara aga dị ihe dị ka GNOME, KDE Plasma, XFCE y pawuda. Ezie na ndị na-esote ga-abụ ihe dị ka Lxde, n'ikpeazụ NXT.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «MATE», nke a na-ewere dị ka otu n'ime ihe kachasị dị mfe ma rụọ ọrụ, dịka ọ dị XFCE, na ụdị omenaala na ezigbo ihe eji eme ya, n'ime ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MATE: Kedu ihe ọ bụ na kedu etu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Ihe ederede zuru oke dika ihe omuma Linux Post Wụnye